माओवादी चुनावपछि कांग्रेससँग मिल्न आउँछ :: Tarun Khabar: Digital Online Paper from Nepal
० तपाई प्रचार प्रसार समितिको सहसंयोजक पनि हुनुहुन्छ । सहसंयोजक भएको हैसियतलले भन्नुपर्दा अहिले देशभर चुनावको प्रचार प्रसार कस्तो भइरहेको छ ?
– एमाले र माओवादी मिलेर मिलेर जसरी उनीहरूले बाहिर हल्ला गरिरहेका छन्, अकंगणितको हिसाब गरेर हामीले जित्छांै, कांग्रेस कमजोर हुन्छ भनेर उनीहरूले जसरी भ्रम सिर्जना गर्ने काम गरिरहेका छन्, अहिले उनीहरूको मुख्य हतियार पनि त्यही भएको छ । तर यथार्थमा त्यस्तो स्थिति देखिँदैन । कतिपय ठाउँमा एमालेका मान्छेहरू माओवादीसँग मिलेकोमा रुष्ट भएका छन् । कतिपय ठाउँमा एमालेसँग मिलेकोमा माओवादीका मान्छेहरू पनि रुष्ट भएका छन् । त्यो आधारमा उनीहरूले जसरी अंकगणितको कुरा गरेर कांग्रेस कमजोर भयो भन्ने कुरा गरिरहेका छन्, त्यो गलत हो । एमाले र माओवादी मिलेर लडेको २०७० सालको संविधानसभा निर्वाचन र २०७४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेसको जस्तो पोजिसन छ, त्यो पोजिसन अहिले कांग्रेसले लिइसकेको छ । प्रतिस्पर्धी दुई दल एमाले र माओवादी मिल्दा पनि हामी २०७० सालकै चुनावकै हाराहारीमा छौ । स्थानीय निर्वाचनकै पोजिसनमा हामी पुगिसकेका छौं ।
० तपाईले स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्नुभयो, स्थानीय निर्वाचनमा एमाले पहिलो र कांग्रेस दोस्रो पार्टी बनेको थियो, अहिले पनि त्यस्तै हुन्छ त ?
– स्थानीय निर्वाचनमा एमाले प्राविधिक रूपमा मात्र पहिलो भएको थियो । केही थोरै भोटले मात्र एमाले अघि थियो । स्थानीय निर्वाचनमा कांग्रेस दोस्रो भए पनि पहिलो पार्टीको हाराहारीमा पुगेको छ । हामी धेरै तल थिएनांै । एमालेकै हाराहारीमा छौं । त्यसमा पनि अहिले फोरम लोकतान्त्रिक नेपाली कांग्रेससँग एकीकृत भइसकेको छ । फोरम लोकतान्त्रिकले पाएको भोट र नेपाली कांग्रेसले पाएको कुल भोट जोड्दा एमालेको भन्दा बढी हुन्छ । सिट संख्या पनि एमालेसरह हुन्छ । अहिले हामी पहिलो पार्टी हुने प्रयासमा छांै । हामी मिल्यौं, कांग्रेसलाई भित्तोमा पु¥याऔं, अब ५० वर्षसम्म हामीले नै खान्छौं भनेर उनीहरूले जसरी प्रचारबाजी गरिरहेका छन्, त्यो निरर्थक प्रचारबाजी हो । चुनावलाई प्रभावित गर्ने त्यो प्रचारबाजी मात्र हो । त्यसमा कसैलाई पनि विश्वास छैन ।
० एमाले र माओवादी एक हँुदा पनि कांग्रेस पहिलो दल हुन्छ भन्न खोज्नुभएको हो ?
– उनीहरू एक भएको अवस्थामा पनि हामी पहिलो हुने प्रस्ट संकेत मैले फिल्डमा देखिसकेको छु् । एमाले र माओवादी मिल्दा पनि एमालेलाई गलत ठान्ने मान्छेहरूले हामीलाई समर्थन गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा खुलेर लागेका छन् भने कतिपय अवस्थामा भित्रभित्रै लागेका छन् । यसैगरी माओवादीलाई मन नपराउने एमालेका मान्छेहरूले पनि हामीलाई समर्थन गरेका छन् । हिजो कतिपय ठाउँमा माओवादीले एमालेका मान्छेलाई दुःख दिएका थिए । त्यो बेलामा एमालेका मान्छेहरू पनि मारिएका थिए । ती मान्छेहरू बडो दुःखित भएर माओवादीसँग मिल्नु थियो त, किन यत्रो लडाइँ लड्नु थियो । बरु कांग्रेस नै स्थिर शक्ति, स्थायी विचार र सिद्धान्तमा आधारित पार्टी हो भन्ने ढंगबाट समर्थन गरेको मैले देख्छु । फिल्डमा हिँड्दाको कुरा गरेको हुँ मैले ।
० तपाईको अनुमानमा कांग्रेसलाई देशभर कति सिट आउला ?
– सिटको कुरा गर्दा ठ्याम्मै यति सिट ल्याउँछ भनेर संख्या त म भन्न सक्दिनँ, तर हामी ठूलो पार्टी हुन्छौं । यो पक्का हो ।
० सरकार बनाउन बहुमत आउँछ कि आउँदैन ?
– हामी बहुमतकै हाराहारीमा हुन्छौं । हिजोको स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्दा पनि हामी ३२ दशमलव ९ प्रतिशत भोटमा छांै । एमाले ३३ प्रतिशतमा छ । हामीसँग विजय गच्छदारको पार्टी पनि थपिएको छ । विजय गच्छदारको पार्टीले ल्याएको ३ प्रतिशत पनि त्यसमा थपिन्छ । त्यसरी जोड्दा कांग्रेसको पक्षमा ३६ प्रतिशत पुग्छ । अहिले १५३ ठाउँमा हाम्रा उम्मेदवार छन् । एमाले र माओवादीका उम्मेदवार ६० प्रतिशतभन्दा कम र ४० प्रतिशतभन्दा कम उम्मेदवार छन् । एमालेको उम्मेदवार भएको ठाउँमा माओवादीका मतदाता काम छाडेर एमालेलाई भोट दिन जान्नन् । अझै टाढा मतदान केन्द्र रहेछ भने काम छाडेर भोट दिन्नन् ।
यसैगरी, माओवादीको उम्मेदवार भएको ठाउँमा एमालेका सबै मतदाताले भोट दिँदैनन् । त्यसैले उनीहरूको भोट प्रत्यक्षमा पनि घट्ने भयो । यसबाट समानुपातिकमा पनि घट्छ । कम उम्मेदवार भएपछि समानुपातिकमा भोट घट्छ नै । यस्तो घाटा एमाले र माओवादी दुवैलाई हुन्छ । यसको फाइदा हामीलाई हुन्छ । यसबाट हाम्रो भोट बढ्छ । साना दलहरू थे्रसहोल्डको कारणले राष्ट्रिय पार्टी बन्न नसकेपछि उनीहरूको भोट पनि हामीलाई फाइदा हुन्छ । यसबाट समानुपातिकमा ४० प्रतिशतभन्दा बढी सिट हामीलाई आउँछ । समानुपातिक र प्रत्यक्ष सिट जोड्दा बहुमतको छेउछाउमा हामी पुग्छौं ।
० अब फेरि माओवादीसँग सहकार्यको सम्भावना तपाईले देख्नुभएको छ कि छैन ?
– अब त माओवादीसँग सहकार्यको सम्भावनाको कुरै आएन ।
० चुनावपछि त्यो सम्भावना छ कि छैन ?
– हेर्नुहोस्, चुनावपछि उनीहरूले एक अर्कालाई गाली गर्न र गद्दार भन्न थाल्छन् । यो अहिले नै घोषणा गरे हुन्छ । किनभने धेरै ठाउँमा माओवादी उम्मेदवार हार्छन् । एमाले लडेको ठाउँमा एमाले हार्छ । हारेको आरोप हामीलाई लगाउने कुरा भएन । एमालेले माओवादीलाई र माओवादीले एमालेलाई आरोप लगाउन सुरु गर्छन् । एकले अर्कोलाई, उसले उसलाई धोका दियो भन्न थाल्छन् । त्यसपछि धोकेबाज पार्टी, गद्दार पार्टी, यो पार्टीको नियत नै ठिक थिएन भन्ने कुरा आउन थाल्छन् ।
० त्यसबेला माओवादी फेरि कांग्रेससँग मिल्छ भन्ने तपाईको बुझाई हो ?
– चुनावपछि एमाले र माओवादी दौडादौड भएर हामीसँग मिल्न आउँछन् । चुनावको परिणाम आएलगत्तै उनीहरू एक अर्कोलाई गाली गर्दै कांग्रेससँग मिल्न नआई सुखै छैन । चुनावपछिको दृश्य मैले अहिले नै देखिरहेको छु ।
० स्थानीय तहको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसलाई अन्तर्घातका कारण केही घाटा भएको थियो । अहिले त्यस्तो अन्तर्घातको सम्भावना देख्नु भएको छ कि छैन ?
– हाम्रो पार्टीमा अहिले अन्तर्घातको कुनै सम्भावना छैन । कांग्रेसमा अभूतपूर्व एकता देखिएको छ । मानौं एमाले र माओवादी भोलि मिलेर जाने हो भने उनीहरूको नियत त देशलाई साम्यवादमा पु¥याउने हो । त्यसैले लोकतन्त्र संरक्षणका लागि पनि नेपाली कांग्रेस एकढिक्का भएको छ । देशभर अभूतपूर्व एकता छाएको मैले देखेको छु । स्थानीय निर्वाचनको जस्तो स्थिति आउँदैन । उम्मेदवार छान्ने बेला भएका प्रतिस्पर्धा थाती राखेर कांग्रेसका सबै कार्यकर्ता निर्वाचनको मैदानमा एकताबद्ध भएर लागेका छन् ।
० उम्मेदवार छनोट गर्ने बेला भएका असन्तुष्टि अझै कायम छ कि छैन ?
– त्यो त अहिले पूरै हराएको छ । उम्मेदवार छनोट गर्ने बेलासम्म प्रतिस्पर्धा थियो । केही दिनसम्म मैले टिकट पाइनँ भन्ने भावना उत्पन्न भएको होला । केही दुखेसो पनि थियो होला, तर अहिले त्यस्तो भावना र दुखेसो सबै हटेर गइसकेको छ । अब एक भएर कांग्रेसलाई विजयी गराउनुपर्छ भन्ने भावना सबै पार्टीका कार्यकर्तामा आएको छ । त्यसैले यसपटक हामी सबै वामपन्थी गठबन्धनलई हराउन र लोकतान्त्रिक गठबन्धनलाई जिताउन पूरै एक भएर लागेका छौं ।
Tarun Khabar0response सोमबार,११ मंशिर २०७४ 831 Views